ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေများများသောက်ပေးသင့်သလား... - Hello Sayarwon
ရေသောက်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ အလေ့အထတစ်ရပ်ပါ။ ဒီယူဆချက်က လူတိုင်းမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ သာမန် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့လိုသလို ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေအနေနဲ့လည်း ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့က အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုပြောရတဲ့ အကြောင်းက ရေဓာတ်ပြည့်ဝမှ မေမေရော ဘေ​ဘီလေးပါ ကျန်းမာမှာ မို့ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေအများကြီးသောက်တာက စိုးရိမ်စရာလား……
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေအများကြီးသောက်တာက စိုးရိမ်စရာလို့ ယူဆပြီး ရေလျှော့သောက်တဲ့ မေမေတွေရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ရေများများသောက်တာက မေမေရော ဘေဘီလေးကိုပါကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ရေအများကြီးသောက်တာက ကိုယ်တွင်းမှာ ရေတွေစုနေပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် ဒီအယူအဆက မမှန်ပါဘူး။ ရေသောက်တာကြောင့် မေမေမှာရော ဘေဘီလေးမှာပါ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ ရေသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အခုလိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ရေက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူမှုကောင်းအောင် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ ဘေဘီလေး မွေးဖွားလာစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ရေဓာတ်မပြည့်ဝရင်သာ ဘေဘီလေးဆီ အာဟာရရောက်ရှိမှုနည်းစေမှာမို့ ရေသောက်ပါလို့ ပြောပါရစေနော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေသောက်ပေးတာက ဘေဘီလေးအတွက် လုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေရရှိစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို ဆီးများများသွားစေပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ကျောက်ကပ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်တာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပင်ပန်းတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် ရေများများသောက်ပေးပါ။ ရေသောက်တာက မေမေအတွက်ရော ဘေဘီလေးအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းမှာ သားအိမ်ကျုံ့တာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
လေ့လာမှုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေသောက်ပေးတာက ရေဓာတ်နည်းတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သားအိမ်ကျုံ့တာကို သက်သာစေနိုင်ပြီး မေမေရော ဘေဘီလေးကို ပါကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။
ရေမြွာရည်နည်းတာက ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးလှုပ်ရှားရအဆင်ပြေစေဖို့နဲ့ အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် မေမေက ရေပြည့်ပြည့်ဝဝသောက်ပေးပါ။
မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ရေလုံလောက်အောင်သောက်ဖို့လိုပါမယ်။ ရေဆိုတဲ့နေရာမှာ နို့၊ အသီးဖျော်ရည်၊ ဟင်းချိုရည်နဲ့ ရေဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံစားသုံးမှုအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ရေသောက်လို့ ဆီးခဏခဏသွားရတယ်ဆိုပေမယ့် မေမေရော ဘေဘီလေးကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်တာကြောင့် ရေသောက်ပေးပါနော် မေမေတို့ရေ
Why Drinking Too Much Water During Pregnancy Is Not A Concern https://www.curejoy.com/content/drinking-too-much-water-during-pregnancy/ Accessed Date9November 2019
How much water should I drink while I’m pregnant? https://www.babycenter.com/404_how-much-water-should-i-drink-while-im-pregnant_5283.bc Accessed Date9November 2019
How much water should I drink during pregnancy? https://www.parents.com/pregnancy/giving-birth/how-much-water-should-i-drink-during-pregnancy/ Accessed Date9November 2019